ဒါဆိုမင်း porn ကိုဖြတ်ချင်လား။ - သင့် ဦး နှောက် Porn တွင်
ဒါကြောင့်သင်ဆေးလိပ်ဖြတ် porn ကဘာလဲဆိုတာ?
ငါဘာကြောင့် porn ကိုစွဲနေရတာလဲ” \_ t
သင် rebooting လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မစတင်မီ Porn၊ Masturbation နှင့် Orgasm (PMO) တို့၏အဘယ်ကြောင့်ဤမျှစွဲလမ်းနေရကြောင်းကိုအရင်လေ့လာရမည်။ သင်သည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုနားလည်ရန်လိုပြီးသင်သည်စွဲလမ်းသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်သည်အမြဲစွဲလမ်းနေသူဖြစ်ကြောင်းအမြဲသတိရသင့်သည်။
အားလုံးဗီဒီယို Watch ။
သင့်ရဲ့နောက်ကျော အခုတော့ဒီဟာကပြင်းထန်တဲ့ပစ္စည်းပဲ။ အဲဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ porn ဟာ ဦး နှောက်ကိုသေစေနိုင်တယ်ဆိုတာအခုသိပြီ။ သင်ဤအရာကိုမသိလျှင်၊ ပြန်၍ ကြည့်ပါ ဦး!
"ငါ PMO နုတ်ထွက်ချင်တယ် ... ထာဝရ!"
Whoa အဲဒီမှာနှေးကွေး ... ကျိုင်းကောင်။ သင်မရှောင်ရှားမီသင့်အတွက်သီအိုရီဆိုင်ရာနောက်ထပ်အလုပ်များကျွန်ုပ်၌ရှိသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာကသင်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်ခဲဆုံးတိုက်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
1 ။ အဘယ်ကြောင့်သင် porn ဖြတ်နေကြသနည်း
ဒါအရေးကြီးတယ် ညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်မထွက်ရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ကိုသင်ရှာရမည်။ ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်။ သင်မေးရန်ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ကဘာလဲ ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ဆိုသည်မှာမည်သည့်အကြောင်းအချက်များမှမထိခိုက်သောဥပမာ - တည်နေရာ၊ အချိန်၊ စိတ်ဓာတ်၊ အခြားစွဲလမ်းမှု၊ လူများစသဖြင့်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသော်လည်းခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်ရှိရန်သေချာစေပါ။
အကြှနျုပျ၏အစိုင်အခဲအကြောင်းပြချက်ဤ: ငါသည်လူကိုဖြစ်ချင်တယ်။ ဂျိမ်းစ်ဘွန်းစဉ်းစားပါ။ တည်ငြိမ်ပြီးစုဆောင်းတစ်ခု alpha အထီး။
ကျွန်ုပ်၏အခြားအကြောင်းပြချက်များမှာ - ငါဟာစိတ်ခံစားမှုကိုခံစားချင်တယ်၊ လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ချင်တယ်၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာထဲဝင်ချင်တယ်၊ ကျန်တဲ့တစ်သက်တာလုံးအဲဒီလူတစ်ယောက်နဲ့အတူနေချင်တယ်။
သင့်ကိုယ်သင်ဂျာနယ်တစ်စောင်ရှာပြီးသင်၏အကြောင်းပြချက်များကိုစတင်ချရေးပါ။ ငါစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုမသုံးပါနဲ့။ ကိုယ့်အမှု၌ကမှားလက်သို့ကျ။ ငါ Springpad ကိုသုံး; Android ဖုန်းများ၊ အိုင်ဖုန်း၊ အိုင်ပက်ဒ်နှင့်စားပွဲတင်ကွန်ပျူတာများအတွက်လာရောက်လည်ပတ်သည် springpadit.com.
2 ။ အားလုံး porn / porn နှင့်ဆက်စပ်သောပစ္စည်းများကိုဖွိုဖကျြ
ဤသည်မှာလည်းအရေးကြီးပါသည်။ သင်တစ်ဦးညစ်ညမ်း stash ရှိပါကအပြီးအပိုင်ကအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါ။ သငျသညျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများဆံ့မဆိုမဂ္ဂဇင်းများရှိပါကသူတို့ကိုပယ်ပစ်။
အဲဒီပိုက်ဆံ, သင်သည်မည်သည့်စောင့်အရှောက်, ပြည့်တန်ဆာ, porn site ကိုစာရင်းပေးသွင်းမှုများအတွက်တက်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လှူဒါန်းပြုလုပ်လှူဒါန်းသို့မဟုတ်တစ်နေရာရာအခြားတစ်ခုကိုဖြုန်းနေကြတယ်။
စသည်တို့ကိုသင်အကြိုက်ဆုံး porn ကြယ်ပွင့်ဖို့လင့်များ, သင့် porn sites များ၏ bookmarks ကိုဖယ်ရှားပစ် Get
3 ။ အစပျိုးခြင်းနှင့်တွေကိုအပိုင်း 1
သင် reboot လုပ်ပြီးတာနဲ့၊ သင် relapse ပြန်လုပ်ရန်တိုက်တွန်းချက်များစွာရှိလိမ့်မယ်။ အဲဒါဖြစ်လာမယ် ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့၊ မင်းအတွက်မင်းရှိနေတာပါ။
လိင်ခပ်သိမ်းသောအရပ်တို့၌ရှိသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုညစ်ညမ်းစွဲဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အခက်ခဲဆုံးစွဲရှိသည်။ တီဗီ, ရေဒီယို, အင်တာနက်, ကမ်းခြေ, လမ်းဘေးကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်, သင့်စိတ်ထဲနှင့်အဘွားအိုသူမ၏သော့ဖွင့်ကောက်ရန်ကျော်ကွေးပင်တစ်ခုတတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအလေးသာကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်သောကွောငျ့သငျသညျ, ဒီမှတ်မိဖို့ရှိသည်။
ရုပ်မြင်သံကြားမှ 'ဆိုးသော' လိုင်းများကိုကြည့်ခြင်း။ ဆိုး, ဆိုး။ အဲဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုရှောင်ပါ။
သငျသညျလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ခုခုဆံ့ပါလိမ့်မယ် KNOW ကြောင်း YouTube ဗီဒီယိုအကဲခတ်။ (အမြိုးသမီးမြားအထဲကအလုပ်လုပ်, ယောဂလဲ tutorial, ရက်ပ်ဗီဒီယိုများ, နာမည်ကြီးတွေစသည်တို့ကို) ဤ relapses ငါ၏နံပါတ်တစ်အကြောင်းရင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
'wallpapers' ကိုရှာဖွေခြင်း။ မင်းပြောတာက“ ငါကအပြစ်မဲ့တဲ့နောက်ခံပုံတွေကိုသာရှာနေတာပဲလေ၊ ငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးအခုဒီအဆုံးရောက်တော့မယ်ဆိုတာငါတို့သိတယ်။ Cool wallpapers မှ> hot wallpapers -> bikini babes -> bikinis မရှိသော bikini သူငယ် - - porn ။ ဒါကိုခေါ်တယ်
'Edging' သည်ချောက်ကမ်းပါးအနားတွင်ရှိခြင်းနှင့်သင်အနားသို့ကြည့်ရှုရန်အနားသို့ပိုမိုနီးကပ်စွာနီးကပ်စွာဆက်လျက်ရှိနေသည်။ နှင့် BOOM! သင်ဤကိစ္စတွင် RELAPSE, ကျသွားတယ်။
စိုက်ထူ။ စိုက်ထူမှုမှန်သမျှကိုသင်ဖြုန်းတီးချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သင်စိုက်ထူလျှင်သင်၏လိင်တံကိုကြည့်ပြီး“ လိင်တံကိုဆီးအိမ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွက်အစစ်အမှန်ပါတနာနှင့်အသုံးပြုသည်” ဟုပြောပါ။
ကဗျာ ငါစိတ်ဓာတ်မကျခဲ့ပုံကိုသတိပြုပါ။ ငါတကယ်အကောင်းခံစားခဲ့ရသည့်နေ့များနှင့်ဘဝသည်တန်ဖိုးမရှိဟုခံစားခဲ့ရသည့်နေ့များတွင်ပြန်ဖြစ်သွားသည် (ဟုတ်တယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေတဲ့အတွေးတွေ) ။ PMO ကနေထွက်လာပြီးဘယ်တော့မှသင့်ရဲ့ GUARD DOWN မချန်ထားကြောင်းသတိရရပါမယ်။
အိပ်ပါ အိပ်စက်ခြင်းကသူကပြောတယ်အရေးကြီးတယ်။ အမြဲတမ်းလုံလောက်စွာအိပ်စက်အနားယူပါစေ။ အိပ်ချိန်နိမ့်ကျခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်နိမ့်ကျခြင်း၊ စွမ်းအင်နိမ့်ကျခြင်း = ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းအန္တရာယ်။ ညီမျှခြင်းကြီး။ သင်အိပ်ချင်နေလျှင်၊ သင်၏အိမ်နှင့်ဝေးဝေးနေပါ။
အဆိုပါမြျှောအပေါ် Be: အစပျိုးခြင်း၏အသိအမြင်အောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်
အိပ်စက်ခြင်းအစောပိုင်း: 10: 00pm
လေ့ကျင့်ခန်း - သံအချို့ကို run သို့မဟုတ် pump ။ ငါကိုယ်အလေးချိန်တက်တာကိုပိုနှစ်သက်တယ်၊ မင်းကိုပိုပြီးဟန်ဆောင်စေတယ်၊ ​​ပြီးတော့မင်းကမင်းအတွက်လည်းကောင်းတယ်။
Socialize - သင်အတိတ်ကလမ်းလျှောက်နေသောလူတစ် ဦး ကိုပြုံးခြင်းသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးတစ် ဦး နှင့်နက်ရှိုင်းစွာစကားလက်ဆုံပြောဆိုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပါ။ ငါတို့ဟာလူသားတွေဖြစ်ပြီးပေါင်းသင်းဖို့လိုတယ်။ porn ကကျွန်တော်တို့ကိုစွဲလမ်းစေတဲ့သူများကိုအထီးကျန်ဖို့တွန်းအားပေးသည်။ porn သည်အထီးကျန်မှုကိုကျွေးသည်။ ကြိုးစားအားထုတ်ပါ၊ ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်ခက်ခဲပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသင်ပေါင်းသင်းခြင်းမပြုလျှင်သင်ထူးဆန်းလိမ့်မည်။
4 ။ ရပ်တန့်ကတိုကျတှနျး
- အိုအချင်းလူ ... ဒါဆိုရင်တွန်းအားတစ်ခုရရင်ငါဘာလုပ်ရမလဲ။
ကျွန်ုပ်သည်သင်၏စိတ်နှင့်စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြခြင်းနှင့်တိုက်ပွဲများတိုက်ဖျက်ရန်မရည်ရွယ်ပါ။ ငါ 2011 ခုနှစ်အလိုတော်ပါဝါနှင့်အတူတိုက်ပွဲများတိုက်ပွဲများနေခဲ့ရသည်။ သင်၏စိတ်ကိုအသုံးပြုပြီး porn ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပြseeနာသည်၎င်းသည် will power အပေါ်တွင်မှီခိုခြင်းဖြစ်သည်။ ပါဝါအလိုတော်အစိုင်အခဲမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချို့ရက်တွေကအားအင်ပြည့်ဝတယ်၊ ရက်အနည်းငယ်အားနည်းနေတယ်။ စွမ်းအင်သည်အားနည်းသောတွန်းအားဖြင့်ထိရောက်မှုရှိသော်လည်း၎င်းသည်အလယ်အလတ်မှအလွန်ပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းမှုနှင့်သက်ဆိုင်ပါကပါဝါသည်အသုံးမကျပေ။
ဒါကြောင့်ငါတိုက်တွန်းချက်ကိုဘယ်လိုရပ်တန့်သလဲ? ငါအချိန်မရွေးရရှိနိုင်သောသောအရာတစျခုကိုသုံး: နာကျင်မှု။ နာကျင်မှုနှင့် ဦး နှောက်နှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားသောအရာတစ်ခုရှိသည်။ ငါတိုက်တွန်းတဲ့အခါငါ့နှုတ်ခမ်းကိုရှေ့သွားတွေနဲ့ကိုက်လိုက်တယ်။ ငါအရမ်းကိုက်တယ် ငါတိုက်တွန်းလုံးဝသွားသည်အထိငါပိုခက်နှင့်ကိုက်။ ၃ ရက်မှ ၇ ရက်အကြာအကိုက်ခံပြီးနောက်တွင်၊ ဟုတ်တယ်၊ ငါထပ်ပြော ဦး မယ်၊
အဘယ်ကြောင့်အလုပ်လုပ်ပါသလဲ (မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: ဤငါ့အလိုရှိသမျှအတွေ့အကြုံအပေါ်နှင့်ဦးနှောက်များကဲ့သို့ဖတ်နေစာအုပ်များနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအနေဖြင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်ငါ၏နားလည်မှုအပေါ်အခြေခံပြီး yourbrainonporn.com နှင့်စိတ်ပညာယနေ့။ )
ဒါဟာအားလုံးဝါယာကြိုးများနှင့် rewiring အကြောင်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်အတွက်၊ ညစ်ညမ်းခြင်းသည်ကောင်းပြီးနာကျင်မှုကဆိုးသည်။ သင်တိုက်တွန်းသည့်အခါတိုင်းနာကျင်မှုကိုဖြစ်စေခြင်းအားဖြင့်သင်သည် porn = pain = bad ကိုသင့် ဦး နှောက်အားပြောပြနေသည်။ သင်လုပ်လေလေ၊ သင့် ဦး နှောက်ကိုပိုမိုလေ့ကျင့်လေလေဖြစ်သည်။
ဤနည်းလမ်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ထိရောက်စွာအကျိုးသက်ရောက်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်သည်နေ့ (၄) ရက်မှစ၍ PMO ကိုတိုက်တွန်းခြင်းမရှိခဲ့ပါ။